स्व. रविन्द्र अधिकारीको क्षेत्रमा वामदेव चुनाव लड्ने चर्चा चलिरहँदा उनी परे डेंगुको सं’कम्रणमा ! – ताजा समाचार
स्व. रविन्द्र अधिकारीको क्षेत्रमा वामदेव चुनाव लड्ने चर्चा चलिरहँदा उनी परे डेंगुको सं’कम्रणमा !
पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको नि’धनपछि रिक्त रहेको कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर- २ मा हुने उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट वामदेव गौतमले उम्मेद्वारी दिने चर्चा चलिरहेको बेला उनी डेंगुको सं’क्रमणमा परेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
नेकपाका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई डेंगु लागेको आशंका भएपछि उनी सोमबार टेकु अस्पताल पुगेर परीक्षण गरेका खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमार्फत सार्वजनिक भएको हो ।
नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ गौतमलाई सोमबारबाट ज्वरो आएको थियो। चिकित्सकले उनलाई डेंगु लागेको आ’शंका गरेका छन्। गौतम केही समयअघि सिंगापुर गएका थिए। त्यही उनलाई सं’क्रमण भएको हुन सक्ने अनुमान चिकित्सकले गरेका छन् ।
सिंगापुरमा डेंगुको महा’मारी फैलिएपछि त्यहाँको सरकारले आप’तकालिन घोषणा गरेको छ। यसअघि कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाललाई पनि डेंगु देखिएको थियो। त्यस्तै वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डा सन्दुक रुइतलाई पनि डेंगु देखिएको छ । शुक्रराज अस्पताल र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कार्यरत सातजना स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि डेंगु देखिएको छ। नेपालभरी कम्तिमा ७० हजार नागरिकहरु डेंगू रोगको संक्रमणमा परेको तथ्याक केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भएको थियो ।
डा सन्दुक रुइत पनि डेंगुको संक्रमणमा, ३ दिनदेखि अस्पताल भर्ना
७० हजार नेपालीमा डेंगु ! यस्ता छन् १० लक्षण र बच्ने उपाय हेर्नुहाेस !!
मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीले तयारी थालेको छ। निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेका स्थानमा मंसिर १४ गते उपनिर्वाचनको लागि मतदाता संकलनसँगै अद्यावधिक गर्ने गरेको छ।
कास्की क्षेत्र नं २ मा हुने उपनिर्वाचनको मतदाताको नामावली केन्द्रमा पठाई सकिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकारी महेन्द्रराज सुवेदीले जानकारी दिए। उनले करिब दुई हजार मतदाता थपिएको बताए। कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा अघिल्लो निर्वाचनमा ७० हजार ६ सय ५१ मतदाता थिए।
अहिले उपनिर्वाचनमा ७२ हजार २ सय मातदाता संख्या पुगेको उनले बताए। उपनिर्वाचन हुने कास्कीको निर्वाचन क्षेत्र– २ मा पोखरा महानगरपालिकाका ११ वटा वडा पर्दछन्।
कास्की क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दु’र्घटनामा नि’धन भएपछि यो क्षेत्र रिक्त रहेको थियो। कास्कीसँगै अन्य जिल्लाका रिक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय घोषणा गरिसकेको छ।
र यो पनि पढ्नुहोस : स्व. रविन्द्र अधिकारीकाे क्षेत्रमा वामदेव, धनराज र रवीन्द्र मिश्र उठ्ने !
कास्की २ मा ३२ निर्वाचनस्थल र ८२ वटा केन्द्र अघिल्लो निर्वाचनमा भए पनि यस वर्ष केन्द्र पनि थपिने उनले बताए।
अघिल्लो निर्वाचनमा ७० हजार ६ सय ५१ मतमा ४९ हजार ९ सय ६ मत खसेको थियो। त्यसमध्ये ४७ हजार ९ सय ८८ मत सदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीले जनाएको छ।